Hodgkin's Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ)
Hodgkin's Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
ရေးသားသူ Dr. Su Sandy ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
Hodgkin’s ရောဂါသည် ပြန်ရည်ကြောစနစ်တွင် ဖြစ်ပွားသော သွေးကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပြန်ရည်ကြောသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းစေပြီး အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရောဂါပိုးများကို တိုက်ခိုက်ပေးသည်။ Hodgkin’s ရောဂါကို Hodgkin’s ပြန်ရည်အကျိတ်ရောဂါဟုလည်းခေါ်သည်။ ထိုရောဂါသည် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ခိုက်နိုင်သော lymphocyte ဟုခေါ်သော သွေးဖြူဥများမှစတင်ဖြစ်ပွားသည်။ Hodgkin’s ရောဂါဖြစ်နေသောသူများတွင် ထိုဆဲလ်များပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ပွားလာပြီး ပြန်ရည်ကြောတစ်လျောက် ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ရောဂါဆိုးလာသည်နှင့် အမျှ သင့်ခန္ဓါကိုယ်သည် ရောဂါများကိုတိုက်ထုတ်ရန် ခက်ခဲလာသည်။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
Hodgkin’s ရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၄၀ အတွင်းနှင့် အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်လျှင် ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းရောဂါကို ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
Hodgkin’s ရောဂါ၏ လက္ခဏာများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည်။
• မနာသောပြန်ရည်ကျိတ်များကို လည်ပင်း၊ ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ တို့တွင် တွေ့ရခြင်း
• ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း
• ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာခြင်း (သင့်ခန္ဓါကိုယ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အလေးချိန်ကျသွားခြင်း)
• အရက်သောက်ပြီးလျှင် ပြန်ရည်ကျိတ်များနာကျင်ခြင်း
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံသင့်သလဲ။
အထက်ပါ လက္ခဏာများ ရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းများရှိလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် တုံ့ပြန်မှုမတူညီပေ။ သင့်အခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာရောဂါသည် အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကို သေချာစွာမသိရပေ။ ဆရာဝန်များသည် ရောဂါပိုးများကိုတိုက်ခိုက်သော ဘီဆဲလ်များတွင် DNA ပြောင်းလဲသောအခါ ထိုရောဂါကို ဖြစ်စေသည်ဟု သိထားသည်။ ပြောင်းလဲသွားသော ဆဲလ်များသည် လျင်မြန်စွာ ပွားလာပြီး အခြားဆဲလ်များသေဆုံးနိုင်သည့်အချိန်တွင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဆဲလ်များသည် အရွယ်အစားကြီးလာခြင်း၊ အရေအတွက်များလာခြင်းများဖြစ်ကြသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဘီ ဆဲလ်များသည် ပြန်ရည်ကြောစနစ်တွင် ကျန်မာသောပုံမှန်ဆဲလ်များနှင့် အတူစုဝေးနေကြပြီး ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ ရောဂါ၏ လက္ခဏာများကို ဖြစ်စေသည်။
ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြော သွေးကင်ဆာ ရောဂါအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အမျိုးအစားသည် ရောဂါတွင်ပါဝင်သော ဆဲလ်များပေါ်တွင်မူတည်ပြီး၊ ကုသပုံများလည်း ကွဲပြားသည်။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ။
ဒီရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
အသက် ။ ။ ဤရောဂါသည် အသက် ၁၅နှစ်မှ ၃၀ ကြား၊ နှင့် အသက် ၅၅ နှစ်အထက်တွင် အဖြစ်များသည်။
ပြန်ရည်အကျိတ်ရောဂါဖြစ်သော မိသားစုရာဇဝင်ရှိခြင်း။ ။ မိသားစုဝင်များတွင် ဤရောဂါဖြစ်ဖူးလျှင် သင့်တွင်လည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို များစေသည်။
လိင်အမျိုးအစား။ ။ ယောက်ျားများတွင် အနည်းငယ် ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ယခင်က Epstein-Barr ရောဂါပိုးဝင်ဖူးလျှင် ။ ။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ယခင်က နေမကောင်းဖြစ်ဖူးလျှင် ရောဂါပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်မကောင်းခြင်း။ ။ HIV/AIDS ကဲ့သို့သော ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသောရောဂါရှိလျှင်၊ ကိုယ်တွင်းအဂါၤများ လဲလှယ်ထားသောကြောင့် ကိုယ်ခံအားဖိနှိပ်သော ဆေးများသောက်နေရလျှင် ရောဂါပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ။
ရောဂါကို အမည်တပ်နိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်သည် ကိုယ်ခန္ဓါကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး၊ သင့်ကို ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ သေချာစွာ ရောဂါရှာဖွေနိုင်ရန် စစ်ဆေးချက်အချို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါ စစ်ဆေးချက်များကို ပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။
• ပုံရိပ်များဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း ။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT) ရိုက်ခြင်း။
• ပြန်ရည်ကျိတ်မှ အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း ။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များရှိနေခြင်းကို စစ်ဆေးရန် ပြန်ရည်ကျိတ်မှ အသားစယူပြီး စစ်ဆေးနိုင်သည်။
• သွေးဆဲလ်များကို အရေအတွက်စစ်ဆေးခြင်း ကဲ့သို့သော သွေးစစ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်း
• ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေသော ဆဲလ်ကို သိစေရန် Immunophenotyping ပြုလုပ်ခြင်း
• အဆုတ်ကောင်းမကောင်းသိရန် အဆုတ်အလုပ်လုပ်ပုံကို စစ်ဆေးခြင်း
• နှလုံးကောင်းမကောင်း သိရှိရန် နှလုံးကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
• ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံနှံ့ခြင်းကို သိနိုင်ရန် ရိုးတွင်းခြင်ဆီယူကာစစ်ဆေးခြင်း
ဟော့ကင်းသွေးကင်ဆာရောဂါဟု သေချာစွာသိပြီးလျှင် ကင်ဆာ၏ အဆင့်ကို သတ်မှတ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ကင်ဆာ၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် အခြေအနေကို သိနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည် သင့်ဆရာဝန်ကို ကုသမှုများပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပါသည်။
Hodgkin’s ရောဂါ၏ အဆင့် လေးဆင့်ရှိသည်။
အဆင့် ၁။ ကင်ဆာသည် ပြန်ရည်ကျိတ်တစ်မျိုးတွင်သာဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂။ ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ပြန်ရည်ကျိတ် နှစ်နေရာတွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော် ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား ၏ တစ်ဖက်ခြမ်းထဲမှာသာ တွေ့ရသည်။ ပြန်ရည်ကျိတ်တစ်နေရာနှင့် နီးစပ်ရာ အဂါ်တစ်ခုတွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနိုင်သည်။
အဆင့် ၃။ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား၏ အပေါ်နှင့် အောက် နေရာများအနှံ့ ပျံနှံ့နေသည်ကို တွေ့ရပြီး၊ ပြန်ရည်ကျိတ်တစ်နေရာနှင့် ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အခြမ်းရှိ အဂါၤတစ်ခုခုတွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်ကို ညွှန်ပြသည်။
အဆင့် ၄။ ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ပြန်ရည်ကျိတ်များမှ အပြင်သို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ခန္ဓါကိုယ်၏ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊ အဆုတ်၊ အသည်း စသော နေရာများသို့ ရောက်ရှိသည်ကို တွေရသည်။
Hodgkin’s Disease (ဟော့ကင်းပြန်ရည်ကြောသွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် ရောဂါ၏ အဆင့်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဓါတုဆေးဝါးများသွင်းပြီးကုသခြင်းနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေး၍ကုသခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသမှုသည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဖျက်ဆီးရန် အားကောင်းသော ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဓါတုဆေးဝါးများသည်လည်း ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေရန် အသုံးပြုသော ဆေးများဖြစ်သည်။ ပါးစပ်မှသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးထိုးခြင်းအားဖြင့် ကုသသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု တစ်မျိုးတည်းသည် အဆင့်နိမ့်သေးသောကင်ဆာရောဂါကို ကုသနိုင်သည်။ ပြန်ရည်ကျိတ်များတွင်သာ ဖြစ်သော ကင်ဆာသည် ပြင်းထန်သော အဆင့်များထက် ပျံနှံ့မှုနှေးသည်။ ပြင်းထန်သော အဆင့်များတွင် ဆေးဝါးဖြင့် ကုသခြင်းကိုလည်း ပေါင်း၍ကုသရသည်။
ပင်မဆဲလ်များ အစားထိုးကုသမှုကို ဆေးဝါးနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုများကို မတုံ့ပြန်သောအခါ သုံးနိုင်သည်။ ပင်မဆဲလ်များ အစားထိုးကုသမှုသည် ကျန်းမာသော ဆဲလ်များကို သင်၏ ကင်ဆာဆဲလ်များနှင့် လဲကာ အစားထိုးကုသခြင်းဖြစ်သည်။
ကုသပြီးသည့်နောက် သင့်ကို ပုံမှန်ပြန်လာပြရန် သင့်ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။
Hodgkin’s ရောဂါကို သက်သာစေနိုင်သော အိမ်တွင်းကုထုံးများ သို့မဟုတ် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲနည်းများ ရှိပါသလား။
Hodgkin’s ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော် HIV ကဲ့သို့သော ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အချက်များကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ သင့်တွင် မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိပါက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေကို ရရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 13, 2017
Hodgkin’s disease. http://www.healthline.com/health/non-hodgkins-lymphoma#Overview1. Accessed 19 Feb, 2017.
Hodgkin’s disease. http://www.healthline.com/health/hodgkins-lymphoma#Diagnosis3. Accessed 19 Feb, 2017.
Hodgkin’s disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hodgkins-lymphoma/basics/treatment/con-20030667. Accessed 19 Feb, 2017.
လက်သည်းကြီးတွေ ခုံးပြီးဖောင်းနေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ။
လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ၊ သိချင်နေကြတဲ့ သွေးအုပ်စု ၄ခုနဲ့ ပက်သက်တဲ့ မေးခွန်းများ ။ ။
ညပိုင်းတစ်ရေးနိုးတဲ့အခါ ချွေးစေးတွေပြန်နေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးလား။ ဒါတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ။ ။
သွေးကင်ဆာအပြင် အခြားသွေးဆဲလ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ရောဂါများ ။ ။